आजीवन जीवन बीमा
मनोजकुमार लालकर्ण वरिष्ठ बजार प्रबन्धक, एलाइन्स इन्स्योरेन्स आजीवन जीवन बीमा पूरै अवधिको जोखिम वहन गर्ने बीमा हो । यसप्रकारको जीवन बीमामा एउटा निश्चित अवधिसम्म बीमाशुल्क तिर्दै जानुपर्छ । तर, बीमितको मृत्यु उपरान्त निजले इच्छाइएको व्यक्ति वा हकवालाले बीमाङ्क तथा बोनस प्राप्त गर्छ । यसप्रकारको जीव...
बीमालेखको अवधि सकिनुअघि नै बीमितले आफूले बीमा गरेको बीमा कम्पनीमा सम्पर्क राख्नुपर्छ । बीमालेख समाप्त हुने मितिको रातको १२ बजेपछि हुने दुर्घटनाको दाबीको भुक्तानी कम्पनीहरूले गर्दैनन् । त्यसैले, बीमालेख समयमै नवीकरण गर्नुपर्छ । बीमा अभिकर्ता वा बीमित आफै सम्बन्धित कम्पनीमा गएर बीमालेखको नवीकरण गराउन...
नेप्सेमा बीमा समूहको प्रभाव बैङ्कको भन्दा धेरै
विगत केही वर्षयता नेपाली शेयर बजारमा बीमा समूहको प्रभाव निकै बढेको देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको विगत एक दशकको तथ्याङ्कलाई बजार विधि (मार्केट मोडल)द्वारा विश्लेषण गर्दा यस्तो देखिएको हो । सो अवधिमा बीमा समूहले नेप्से परिसूचकमा ८५ प्रतिशत प्रभाव पार्दै आएको देखिन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत ९ ओटा समूहम...
अमेरिका र यूरोप बुलिश, एशिया–प्यासिफिक मिश्रित
अमेरिका गत हप्ता अमेरिकी शेयर बजार उकालो लागेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले काङ्ग्रेससँग बजेटसम्बन्धी सम्झौता हुनेमा विश्वस्त भएको बताएका छन् । ओबामाले फिस्कल क्लिफ सङ्कट हटाउनका लागि डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन पार्टीहरूका वरिष्ठ नेतासँग बैठक बसेपछि गत हप्ता बजारमा सुधार देखिएको हो । जर्मनी...
सातामा सुनको मूल्य करीब रू. ५ सय बढ्यो
गत साता सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ४ सय ९० ले बढेको छ । साताको पहिलो दिन (आइतवार) प्रतितोला रू. ६० हजार ३ सय ६१ मा किनबेच भएको सुन शुक्रवार रू. ६० हजार ८ मा ५१ मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले जानकारी दिएको छ । साताको कुनै दिन अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेको र कुनै दिन अमेरिकी ड...
जीवन बीमाको मूल स्वरूप : म्यादी बीमा
मनोजकुमार लालकर्ण वरिष्ठ बजार प्रबन्धक, एलाइन्स इन्स्योरेन्स म्यादी बीमा मुनाफामा सरिक हुने खालको हुँदैन अर्थात् मुनाफारहित हुन्छ । बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम मात्र बीमितको हकवालाले प्राप्त गर्छ । बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएन भने बीमितले बीमाङ्क रकम प्राप्त गर्दैन । म्या...
ग्राहमका मुख्य तीन लगानी मन्त्र
ठूला लगानीकर्ताका रूपमा चिनिन्छन्, वारेन बफेट । अधिकांश शेयर लगानीकर्ताहरू उनलाई आदर्शसमेत मान्छन् । वारेन बफेटले लगानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ‘सेक्युरिटी एनालाइसिष्ट’ (१९३४) र ‘दि इण्टेलिजण्ट इन्भेष्टर’ (१९४९) किताब नै लेखेका छन् । ती किताबमा लगानीसम्बन्धी विभिन्न तरीकाहरू...
कम्पनी विश्लेषण : सिभिक डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
धादिङ जिल्लामा मुख्य कार्यालय स्थापना गरी बैङ्किङ कारोबार गर्ने पहिलो विकास बैङ्क सिभिक डेभलपमेण्ट बैङ्क हो । यो बैङ्कले २०६६ साउन २९ गतेदेखि वित्तीय काराबार गर्दै आएको छ । वित्तीय, पर्यटन, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, शैक्षिक, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रका लगानीकर्ताको संलग्नतामा यो बैङ्क स्थापना भ...
अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्दै सीईईए
कस्मिक इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयरिङ एशोसिएट्स प्राइभेट लिमिटेड (सीईईए) ले लाजिम्पाटस्थित होटल र्‍याडिशनमा हालै विस्तार गरिएका १ सय कोठामा विद्युतीकरणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको छ । ‘नेपालका पाँचतारे होटलमा यस किसिमको कामको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सीईईए पहिलो स्वदेशी कम्पनी हो,’ कम्पनीक...
उदाउँदै सेलाउँदै गर्ने मुद्दा : शेयर लगानीकर्ताहरूलाई प्यान
शेयर लगानीकर्ताहरूलाई स्थायी लेखानम्बर (प्यान) लिन अनिवार्य गर्ने चर्चा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको भए पनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक गत साउन १७ गते आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको तीनदिने व्यवस्थापन गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा रू. १० लाखभन्दा बढीको शेयर व्यापारमा प्यान अनिवार्य गराउने...